“Mas’uuliyiinta Ciidamada Myanmar oo lagu Eedeeyaay kufsiga Haweenka ee Dalka”: – Radio Muqdisho
waraarka laga helayo dalka Myanmar ayaa sheegay in ay jiraan Kufsi loo geeystay haweenka Rohingya waxana lagu Eedaynaya ciidamada amaanka ee Dalka Myanmar.
wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa wareysiyo ay la yeeltay 29 haween ah oo u soo qaxay dalka ay deriska yihin ee Bangladesh.
waxa ay sheegen in ay dhibaato ku qabeen Dalkoodi hooyo hatan ay baa qoxooti ku yihin Dalaalka ay dariska yihin islaa markasina aysan dooneynin in ay dib ugu noqdaan Myanmar.
Dhibbanayaasha faraxumeynta galmaada lo geystay ayaa sheegay in ay ku jiraan dhowr xeryood oo qaxooti ku yihiin. ku waasi oo wareysiga laga qaday.
Haweenkasi ayaa dhamaan waxay sii isku mid ah uu sheegen in ay jiraan
dhibaato ay kala kulmeen ciidamada ay isuug jiraan kufsi iyo jirdil tasina ay usii dheertahay barakicin looga saraayo dalkooda Myanmar.
wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa haweenkan qarisay magac yadooda kadib markii ay codsadeen in aan la shaacin sabaabo amaan oo ay ugaa baqayaan qoysaskooda in loo waxa yeeleyo.
doodaan ayaa loqabtay haween da,aadooda ay u dhexeyso 13 sano jir ilaa 35 jir, kuwaaso ka yimid qaybo ka mid ah tuulooyin ballaaran oo ku yaala gobolka Ranaan ee Myanmar weerardan ay intooda badan waxay dhaceen intii udhaxaysay October 2016 iyo bartamihii sebtambar.
ha, yaad ah u dood ah xuquuqda haweenka ayaa ugu baqay Dowlada Myanmar in ay waxa ka qabto dhibtaad ka dhanka ah shacaabka gar ahaan haweenka tacadiyad lo geysanyo.